जहाँ तपाईं सिक्न रूपमा पतिको गर्न सबै भन्दा राम्रो महिला । (पुरुष, सम्पर्क, नयाँ मान्छे भेट्न)
जहाँ तपाईं जान, आफ्नो राय मा, सबै भन्दा राम्रो मौका हुनेछ संग सम्पर्क मा एक महिला मेरो उमेर । नमस्कार पाउन महिला जरूरी छैन सजिलो छ । त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् पूरा गर्न महिला । प्यारा शटलसमूह धेरै स्मार्ट छन्, तर बनाउन पनि काम को एक धेरै छ । महिला छन् हामीलाई जस्तै मानिसहरू पनि बथान पशुहरू. को धेरै छन् मानिसहरू जो न्यायाधीश. त्यसैले तपाईं प्रयास गर्नुपर्छ पनि संग मित्र । क्लबहरू छन्. सधैं राम्रो विचार प्राप्त गर्न मानिसहरूलाई थाह छ । झुकाव, तपाईं छनौट गर्नुपर्छ सही क्लब । जसले चाहन्छ नृत्य गर्न जान गर्नुपर्छ, त्यसो बनाउँछ किनभने यो उहाँलाई खुसी, र छैन किनभने महिला । तपाईं गर्न सक्छन् छिटो परिणाम मा विपरीत, यो इरादा थियो । तपाईं स्पष्ट हुन, के हो तपाईं को विशेष प्यारो गर्ने र त्यसपछि तपाईं प्रश्न छ कि बनाउन सक्ने महिला पनि मजा । किनभने मात्र ती छन् जो मा नै वेभ लम्बाइ स्वागत समारोह छ । लागि रूपमा इन्टरनेट पोर्टल, तपाईं यस प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सारा कुरा नुन को एक अन्न संग. यो विशेष महत्त्वपूर्ण छ भनेर सुनिश्चित गर्न मिटर छ रूपमा छिटो संग भेट्न(कारण रसायन). याद गर्न पनि झुण्ड प्रेरणा, जो एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. तपाईं आशा गर्न त्यहाँ, मित्र को सर्कल मा, एक त-भनिन्छ सेतो शूरवीर गरेको उपस्थिति र प्रिय गएको छ, तपाईंलाई थाहा. सबै भन्दा राम्रो बनाउन छ एक मिश्रण, को संभावना संचालक छ । त्यसैले यो संग एकल यात्रा, एकल दल, क्लब को एक सदस्य आफ्नो रुचि को, इन्टरनेट, वा प्रयास गर्न सरल परिवर्तन मा आफ्नो मित्र को सर्कल वा कम्पनी मा. तर एउटा कुरा सधैं महत्त्वपूर्ण छ (शब्दहरू केही बिंदु छ, यो ठीक छैन) तौलिया मा फेंक, अचल पहिरनलाई दूर. तपाईं यो मा एउटा तरिका वा अन्य काम, तपाईं ध्यान गर्नुपर्छ संकेत, एक महिला तपाईं हिम्मत (यो एक सुन्दर शाम, हामी यो के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि, तर म पर्छ । तपाईं बस एक सुन्दर शाम र थियो एक अनुभव गर्न अधिक भन्न छ । पछि चलान महिला धेरै प्रयोग छैन र हुन सक्छ रूपमा चाँडै, ढलान डिजाइन गरिएको छ । शान्त रहन र भद्र छ । मा तपाईं वर्ष बरु तपाईं को लागि समय छैन । यदि त्यो गर्छ, त्यसपछि तपाईं जान सक्नुहुन्छ? आफ्नो, र तपाईं जस्तै वा प्रश्नहरू मा यो गर्न कसरी. तपाईं के भने, त्यसपछि तपाईं पहिले नै हुनुहुन्छ कुराकानीमा. के यो दिन को एक जोडी छ । यदि राम्रो हावा, त्यसपछि तपाईं सोध्न भने, त्यो पूरा गर्न चाहन्छ । तर केही जान्छ सिनेमा । पूरा । तपाईं देखि प्राप्त छैन थाह त राम्रो छ । तपाईं छौं यो बनाउन कुनै तरिका छ । बस प्रयास गर्नुहोस्.
बैठक बाहिर हात थियो त्यसपछि छोटो पदयात्रा । पहिलो सबै को, यो केवल एक सानो, तर कुनै तरिका उहाँले सधैं फेला एक कारण यो विस्तार गर्न. अन्त मा, हामी मा आए एक रात र एक दिन र मी. यो भएको अविश्वसनीय मजा छ । के मलाई प्रहार थियो कति उहाँले हेरविचार गरे, मलाई सधैं सोधे कि, यो मेरो लागि राम्रो र खान. यो अनौठो लाग्न सक्छ, तर हामी हामीलाई थाहा नै लागि एक धेरै लामो समय र उहाँले बनाएको छ उनको लागि कहिल्यै. उहाँले स्वीकार गरेको छैन बिस्कुट. रेल मा त्यो लागि देख थियो सजग मेरो अरे, एक माग, उदाहरणका लागि, म बस्न उहाँलाई अर्को. समयमा पदयात्रा हामी बारेमा धेरै कुरा हाम्रो परिवार छ । ज्यादातर उहाँले बताउनुभयो प्रेम, सम्बन्ध र छोराछोरीलाई । उहाँले मलाई सोध्नुभयो उदाहरणका लागि कसरी म सोच्न छोराछोरी र कसरी म कल्पना आदर्श साथी । बीच मा, उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले अझै भेट गर्न छ जो कुनै पनि महिला गरेको यो पदयात्रा र उहाँले टोपी अगाडि मलाई । उहाँले भन्नुभयो कि हामी गर्न सक्छन् मा भ्रमणको अवसर, अन्य ठूलो ठाउँमा भ्रमण गर्न । आफ्नो योजना उहाँले भर्न सक्छ अर्को दुई वर्ष मा. तर त्यसपछि, अनौठो कुरा भयो । उहाँले मलाई सोधे भने म रुचि थियो, एक परिचय को. म कुनै भन्नुभयो र म छु न कान्छो मा मानिसहरू अन्धा मिति. अर्को समय, उहाँले यो, मेरो परिवार छ भने सोधे हामी चलिरहेको दुई एक्लै रात मा क्षेत्र माध्यम. ल्याउन मेरो परिवार दाँत, कि आज यहाँ के, को रात हावा । वास्तवमा, उहाँले रुचि मेरो परिवार, आदेश, तपाईं सधैं राम्रो ग्रेग र सोध्छन् कसरी तपाईं. पछि यो पदयात्रा, म सम्झना कि उहाँले भन्नुभयो, धेरै वर्ष पहिले, उहाँले जान्छ संग एक सम्भव साथी पैदल यात्रा.
भने हेर्न नै चासो वर्तमान हो
म बिर्सेका थिए अहिले सम्म । तपाईं मलाई मदत गर्न सक्छ र म तपाईंलाई बताउन सक्छ किन उहाँले गरेको अभिनय त अनौठो छ । किन भन्छन मलाई हाइकिङ, मेरो -यू र त्यसपछि जस्तै कुराहरू भन्छन् । म बुझ्न छैन-यति-सही । कृपया माफ लामो पाठ र धेरै धन्यवाद छ कि गरे. नमस्कार, म एक जवान उमेर मा को छ । थियो एक अनुभव को धेरै र सम्बन्ध महिलाहरु संग मेरो उमेर । लागि एक राम्रो वर्ष मा म छु अधिक परिपक्व महिला । छ कि सामान्य छ । आकर्षक र सक्थे धेरै मा मेरो उमेर बस चासो छैन मलाई, किनकि म जाँदै छु, चाँडै मेरो पिताजी संग, छुट्टियहरुको मा म तपाईंले सोध्न चाहन्थे, कहाँ, कसरी, र जब म थाह प्राप्त गर्न सक्छन् मा सहायता छ सबै भन्दा राम्रो केटी छ । त्यसैले छु, फेरि एकल, पक्का, मलाई के थाहा यो दल र महिला भेट्न, तर यो त सजिलो छैन, गाउँ वा को लागि सधैं किनभने, म छु धेरै अग्लो र अधिक स्थिर । खैर, छैन भन्दा बढी एक आँखा लागि भोजमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा र यो गर्छ, सेमी अग्लो र पनि बाक्लो एक महिला शुभकामना मलाई सानो छ तर त्यो पाउन गाह्रो छ.
जहाँ तपाईं एक मानिस रूपमा को सबैभन्दा ठूलो मौका कसैले बारेमा एउटा अनुप्रयोग प्राप्त गर्न कसैले थाह. जहाँ सिक्न गर्न सबै भन्दा राम्रो महिला लागि एक रात । जवाफ. पुरानो छ र हास्यास्पद छैन अब । नमस्ते, त्यसैले म हिजो थियो र दिन अघि हाम्रो राष्ट्रिय भोज, म प्राप्त गर्न चाहन्थे थाह उपयोगी रूपमा एक र राम्रो महिला । मात्र समस्या थियो, कम से कम महिला सुन्दर छन् र सधैं समूह मा बढी महिला वा र पुरुष मा जाने, र तपाईं बोल्न सक्छ । यो हुन सक्छ मित्र छ (भने त्यो एक छ), वा तिनीहरूले कुरा गर्न सजिलै प्रत्येक अन्य र हो भन्न बस. र म कसरी गर्नुपर्छ सबै भन्दा राम्रो प्रतिक्रिया, र के एक विषय को कुराकानी. म कसरी यस्तो समस्या सबै भन्दा राम्रो छ । धन्यवाद तपाईं के तपाईं को लाग्छ, यो भ्रमण गर्न अन्य काम मा वा देखि काम गर्न, माथि टिप्न छ भने आफ्नो छैन, सँगै अब मानक मापन पूरा । तपाईं कसरी बारेमा सोच्नुहोस्. जान्छ कि तपाईं को लागि पनि टाढा वा छ यो एक अर्को चरण हो । किन यो हुन सक्छ अन्य महत्त्वपूर्ण भ्रमण गर्न काम मा मलाई वा मलाई टिप्न. उहाँले मलाई सोध्नुभयो भने उहाँले मलाई काम गर्न जान सक्नुहुन्छ, मलाई काम देखि माथि टिप्न । तर, पछि म मात्र बस थालेका छ, हामी सहमत छन्, लागि संग एक राजा एक महिना मा.
तपाईं कसरी बारेमा सोच्नुहोस्
म एक गम्भीर प्रश्न गर्न सबै मानिसहरू कुनै कुरा के उमेर । मलाई थाहा छ हरेक मानिस फरक छ र किन कि म सोध्न हरेक एक अनुसार, आफ्नो व्यक्तिगत राय छ । प्रत्येक मानिस बुझ्छ अधिक वा कम राम्रो र अचम्मको महिला भन्ने उहाँलाई थाहा छ, तर तपाईं सक्नुहुन्न प्रेम पर्नु तैपनि, को पाठ्यक्रम, यी प्रत्येक ठूलो महिलाहरु । अब मेरो प्रश्न: के एक महिला गर्न आवश्यक छ वा कसरी एक महिला हुनुपर्छ के विशेषताहरु तपाईं उसलाई भन्न: उनको संग, म कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एक सम्बन्ध छ । म केही अर्थ छ कि के गर्न संग, को उपस्थिति, तर केवल मा चरित्र छ । वा त्यहाँ छ कहिल्यै. म भावना सबै महिला छन् केहि चाहनुहुन्छ वा चाहनुहुन्छ सम्बन्ध र अन्य बस चाहनुहुन्छ सेक्स । र जहाँ म पाउन यस्तो एक महिला । म सिर्फ हुनेछ जस्तै केही शारीरिक निकटता संग एक महिला र यो हुनुपर्छ भन्ने अहिले आएको सेक्स । को बस एक बिट र. म भने, म हुनेछ, धेरै मायालु छ, तर दुर्भाग्यवश, तपाईं गर्न सक्छन्. के हो को संभावना मा एक महिला, एक अनलाइन बजार छ । वा जहाँ. मलाई लाग्छ, कुनै तरिका को सबै भन्दा महिला मेरो उमेर पाउन हुनेछ, यो बस नीरस, उल्लेख छैन कान्छो ।
फोटो डेटिङ सुझाव र सल्लाह →